Ukufunda ukuGuqulwa kweFreemium kuthetha ukuba ujonge malunga nokuHlolwa kweMveliso | Martech Zone
NgoMvulo, Aprili 26, 2021 NgoMvulo, Aprili 26, 2021 UJeremy Levy
Nokuba uthetha iRollercoaster Tycoon okanye iDropbox, iminikelo ye-freemium qhubeka ube indlela eqhelekileyo yokutsala abasebenzisi abatsha kwiimveliso zesoftware zabathengi kunye nezamashishini ngokufanayo. Nje ukuba bangene kwiqonga lasimahla, abanye abasebenzisi baya kuthi ekugqibeleni baguqukele kwizicwangciso ezihlawulelweyo, ngelixa uninzi luza kuhlala kwindawo yasimahla, umxholo kunye naziphi na izinto abanokufikelela kuzo. Research kwizihloko zotshintsho lwe-freemium kunye nokugcinwa kwabathengi kuninzi, kwaye iinkampani zihlala zicelwe umngeni ukuba zenze nokuphuculwa okungaphezulu kokuguqulwa kwe-freemium. Abo banokuma bavune umvuzo omkhulu. Ukusetyenziswa okungcono kohlalutyo lwemveliso kuya kubanceda bafike apho.
Ukusetyenziswa kweNqaku kuXela iNtaba
Umthamo wedatha oza kubasebenzisi besoftware uyothusa. Yonke into esetyenzisiweyo kwiseshoni nganye isixelela okuthile, kunye nesiphumo sokufunda sinceda amaqela emveliso ukuba aqonde uhambo lomthengi ngamnye, ngokwenza uhlalutyo lwemveliso edityaniswe yokugcina idatha yelifu. Ngokwenyani, umthamo wedatha awuzange ube ngumba wokwenyani. Ukunika amaqela emveliso ukufikelela kwidatha nokubenza bakwazi ukubuza imibuzo kunye nokufumana ulwazi olunokubakho- lelinye ibali.
Ngelixa abathengisi basebenzisa amaqonga ahlaziyiweyo omkhankaso kunye neBI yemveli iyafumaneka ukujonga ezimbalwa zeemetric zembali, amaqela emveliso ahlala engenako ngokulula ukuhambisa idatha ukubuza (kunye nokuphendula) imibuzo yohambo lwabathengi abafuna ukuyilandela. Zeziphi izinto ezisetyenziswa kakhulu? Ukusetyenziswa kwento kuhlala kuncipha nini ngaphambi kokuyekiswa? Basabela njani abasebenzisi kutshintsho ekukhetheni kweempawu kwindawo yasimahla xa ubhatala? Ngokuhlaziywa kwemveliso, amaqela angabuza imibuzo engcono, ukwakha iingcamango ezingcono, ukuvavanya iziphumo kunye nokuphumeza ngokukhawuleza imveliso kunye neenguqu zendlela.
Oku kwenza ukuba kube nokuqondwa okunzulu ngakumbi kwesiseko somsebenzisi, ukuvumela amaqela emveliso ukuba ajonge kumacandelo ngokusetyenziswa kwento, ukuba basebenzise ixesha elingakanani isoftware okanye bayisebenzisa kangaphi, ukubonisa ukuthandwa kunye nokunye. Umzekelo, unokufumana ukuba ukusetyenziswa kwento ethile kukubeka isalathiso ngaphezulu kwabasebenzisi abakwi-tier yasimahla. Ke hambisa inqaku kumgangatho ohlawulelweyo kwaye ulinganise isiphumo sokuhlaziya kokubini kwinqanaba elihlawulelweyo kunye nenqanaba lesimahla le-churn. Isixhobo sendabuko se-BI sisodwa sinokuza kufutshane kuhlalutyo olukhawulezileyo lolu tshintsho
Ityala leeBlues zeTree-Tier
Injongo yenqanaba lasimahla kukuqhuba izilingo ezikhokelela kuphuculo lokugqibela. Abasebenzisi abangaphuculiyo kwisicwangciso esihlawulelweyo bahlala beziko leendleko okanye banokuziyeka. Ayivelisi ingeniso yobhaliso. Uhlalutyo lwemveliso lunokuba nefuthe elihle kuzo zombini ezi ziphumo. Abasebenzisi abalahlayo, umzekelo, amaqela eemveliso anokuvavanya indlela ezisetyenziswa ngayo iimveliso (ukuya kuthi ga kwinqanaba lomgangatho) ngokwahlukileyo phakathi kwabasebenzisi abachithwe ngokukhawuleza ngokuchasene nabo babesenza into ethile ixesha elithile.
Ukugcina ukuphuma ngokukhawuleza, abasebenzisi kufuneka babone ixabiso elikhawulezileyo kwimveliso, nakwinqanaba lasimahla. Ukuba amanqaku awasetyenziswanga, inokuba luphawu lokuba ijika lokufunda kwizixhobo liphezulu kakhulu kubasebenzisi abathile, ukunciphisa amathuba okuba baya kuze baguqukele kumgangatho ohlawulelweyo. Uhlalutyo lweMveliso lunokunceda amaqela avavanye ukusetyenziswa kwento kunye nokwenza amava angcono emveliso anokukhokelela kuguquko.
Ngaphandle kokuhlaziywa kwemveliso, kunganzima (ukuba akunakwenzeka) kumaqela emveliso ukuba aqonde ukuba kutheni abasebenzisi beyeka. I-BI yemveli ayinakubaxelela okungaphezulu kunangaphi abasebenzisi abangasasebenziyo, kwaye ngokuqinisekileyo ngekhe ichaze ukuba kutheni kwaye kutheni isenzeka okwenzeka emfihlekweni.
Abasebenzisi abahlala kumgangatho wasimahla kwaye baqhubeke nokusebenzisa amanqaku amiselweyo babonisa umceli mngeni owahlukileyo. Kucacile ukuba abasebenzisi banamaxabiso kwimveliso. Umbuzo ngowokuba ungabunyusa njani ubudlelwane babo esele bukhona kwaye zihambise kumgangatho ohlawulelweyo. Ngaphakathi kweli qela, uhlalutyo lwemveliso lunokunceda ekuchongeni amacandelo ahlukeneyo, ukusukela kubasebenzisi abangafakwanga (hayi eyona nto iphambili) kubasebenzisi abatyhala umda wokufikelela kwabo simahla (icandelo elilungileyo lokugxila kuqala). Iqela lemveliso linokuvavanya indlela aba basebenzisi abasabela ngayo kwimida engaphezulu yokufikelela kwabo simahla, okanye iqela linokuzama isicwangciso-qhinga soqhakamshelwano esahlukileyo sokuqaqambisa izibonelelo zecandelo elihlawulelweyo. Nokuba yeyiphi na indlela, uhlalutyo lwemveliso lwenza amaqela alandele uhambo lwabathengi kwaye aphindaphinde into esebenzayo kuseto lwabasebenzisi ngokubanzi.
Ukuzisa ixabiso kulo lonke uhambo lwabaThengi
Njengoko imveliso iba ngcono kubasebenzisi, amacandelo afanelekileyo kunye ne-personas ziyabonakala ngakumbi, zibonelela ngemikhankaso enokutsala abathengi abajongeka njengabo. Njengabathengi basebenzisa isoftware ngokuhamba kwexesha, abahlalutyi bemveliso banokuqhubeka nokufumana ulwazi kwidatha yomsebenzisi, bemephu yohambo lwabathengi ukuya ekuyekisweni. Ukuqonda ukuba yintoni ebambezela abathengi ukuba benze-zeziphi izinto abazenzileyo nabangazisebenzisanga, indlela olusebenzise ngayo utshintsho ekuhambeni kwexesha-lulwazi oluxabisekileyo.
Njengabantu abasemngciphekweni abachongiweyo, vavanya ukubona ukuba amathuba ophando ahlukeneyo aphumelela njani ekugcineni abasebenzisi ebhodini kunye nokuzisa kwizicwangciso ezihlawulelweyo. Ngale ndlela, i-analytics ilungile entliziyweni yempumelelo yemveliso, ikhuthaza ukuphuculwa kwento ekhokelela kubathengi abaninzi, ukunceda ukugcina abathengi abakhoyo ixesha elide kunye nokwakha imephu yendlela ebhetele kubo bonke abasebenzisi, ngoku nakwixesha elizayo. Kunye nohlalutyo lwemveliso enxulunyaniswe nendawo yokugcina idatha yelifu, amaqela emveliso anezixhobo zokuthatha ithuba eliphezulu ledatha ukubuza nawuphi na umbuzo, enze i-hypothesis kwaye avavanye indlela abaphendula ngayo abasebenzisi.
tags: umrhumo wobungozibusiness intelligenceyokugcina idatha yelifuuhambo lwabathengiisoftware yeshishiniInqanaba lasimahlafreemiumukuguqulwa kwe-freemiumihlawulwe ehlawulelwayoii-saasImirhumo yesoftwareukubhaliswa
UJeremy Levy usekwe ngokudibeneyo Ibonisa nomhlobo kunye noovulindlela kwimidiya yoluntu u-Andrew Weinrich emva kokufumana isidingo sedatha yomthengi esemgangathweni ngelixa eqhuba iMetroMoi, indawo esekwe kwindawo yokuthandana abayithengisileyo kuMatch.com. I-duo ikwaseke i-Xtify, isixhobo sesaziso esiselfowuni abasithengise kwi-IBM.
Ukuphinda-phinda: Ezona zenzo zibalaseleyo zokuPhepha okanye ukuLungisa iiNkcukacha zaBaxumi